Newe mawebsite ane mabhiriyoni ari paInternet nhasi, sew muridzi weimwe nzvimbo, unogona kunge uchifunga kuti hacha mikana yakawanda yokuti cibercriminoso inogona kutora yako. Zvisinei, tisati tasvika piz izvozvo, ngatidzokerei kwekanguva tigofunga kuti webhusaiti yako inorevei kwauri.
Você pode usar o munhu, um aplicativo chamado web yusaiti ou um kunyange bhizinesi rebhizimisi rekuInternet kuti iwe unofunga hauna hanya. Iko kune kukosha mune zvose uye kunyange nzvimbo ine zvinyorwa inobata mamwe marudzi and data. Zvichida zita rekutumidzwa nephasiwedi yaunoshandisa painel dzose dzekombiyuta yako yepaIndaneti? Kana iwe uine bhizinesi duku, webhusaiti yako inomirira mararamiro ako uye mukurumbira, pamwe chete nematoni ehumwe ruzivo rwekukosha huri wega chete, asiwo vatengi vako.
Kana iwe wawana zvinyorwa kubva Forbes, The Economist kana nhamba ipi zvayo yekambani yekuchengetedzwa kweInternet kunze uko nhasi, zvinonyanya kunge iwe unoziva izwi rokuti ‘Data e seus dados Mafuta’. Yakava imwe yezvinhu zvisingakoshi zvakanyanya zviripo paIndaneti nhasi (uye saka tinoona kuwedzera kweVPN) uye sechinhu chero chipi zvacho, chinogona kubiwa uye kutengeswa kana kuchinjana.
Os criminosos cibernéticos têm acesso a web sites e sites, como vanshandisa zvishandiso zvinoshandisa kusununguka kuongorora nzvimbo yese yavanosangana nayo, kungounganidza mashoko. Kana vasingakwanisi kushandisa ruzivo, vanogona kutengesa kune mumwe munhu anogona.
Se você está procurando um lugar para fazer uma visita a midiiyo yatinoshandisa mawebsite edu, você pode ter uma experiência diferente com outras opções. Izvi zvinosanganisira nzvimbo mbiri huru; 1) kuchengetedza webusaiti pachayo uye 2) kuchengetedza data iyo vatengi vako vanokupai.
2 3. Shandisa HTTPS como SSL
2.1 Chinyorwa 7 DDoS Kudzivirira Certificado SSL. Apoio, suporte Teste grátis 30 mazuva 30 mazuva 30 mazuva Shanyira paIndaneti: Incapsula.com 3. Cloudflare
Izvi zvinonyanya kukosha kune avo vari kushandisa zvishandiso zvepawebhorosi izvo zviri pachena. Nenzira yavo chaiwo, mashandisi akazaruka anosiya ivo vanotambura kune avo vari kutsvaga kushandiswa. Kuti urwise izvi, painel zvigadzirwa zvakawanda zvaungashandisa kukubatsira kuti uone.
Você pode usar o LastPass, Dashlane ou KeePass. Vamwe vakasununguka, vamwe havasi.
3. Shandisa HTTPS como SSL
Kune vaya vari kutengesa mabhizimusi epaIndaneti kana kuita chero chero rudzi rwekutengeserana kwevatengi venyu paIndaneti, SSL haisi yekusarudza. SSL SSL zvitifiketi zvinogona kuwanikwa kubva kune dzimwe nzvimbo asi yako yakanakisa kutengesa ndeyokuwana mumwe kubva kune munhu anopa mbiri akadai saiye SSL.com.
Você está hospedado na web, hospedando-se na A2Hosting no SiteGround uyewo shandisa sewechitatu-zvekare mutengesi zvakare uye anogona kuzvitengesa kwauri.
Digitar inonyanya kuzivikanwa zveS SSL uye ine zvingasarudzwa zvakasiyana-siyana zviripo
Você pode obter hospedagem de sites, hospedagem de sites e outros sites de comércio eletrônico como um site de comércio eletrônico, onde você pode obter mais informações sobre o purogiramu e como você pode obter o zvose zvese zvaunoda. Dzvanya apa uone WHSR yakazara yakazara runyorwa rwevangangoita webhusaiti hoster.
Zvichiitika, kunyange kana i usiri kuzoshanda site de comércio eletrônico, makambani ewebhu nhasi anotarisira kunze kwekuchengeteka zvakare.
Teste grátis 30 mazuva 30 mazuva 30 mazuva
Cloudflare oferece uma rede de distribuição de conteúdo (CDN), rede de distribuição de conteúdo da CDC, rede de distribuição de conteúdo (CDN), rede de distribuição de conteúdo e distribuição de conteúdo (DDoS). Zvakare, kufanana neIncapsula, Cloudflare mutengo wekutengeserana kwepamusoro painel zvakanyanya kuvharika.
Newe nettstedet ane mabhiriyoni ari paInternett nhasi, sewe muridzi weimwe nzvimbo, unogona kunge uchifunga